File Upload Software in Myanmar — MYSTERY ZILLION
File Upload Software in Myanmar
MZ Member များ
ကျွန်တော် ဟိုဟိုဒီဒီမှ ရှာဖွေထားသော ဖိုင်လ်များကို File Upload လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဥပမာ. ifile.it, mediafire တို့ကနေပေ့ါ။
Rapid ကြီးကတော့ အဆင်မပြေတာများကြလွန်းလို့ပါ။ File Upload ဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးနဲ့ဆိုရင် အဆင်ပြေမလားလို့ပါ။ မြန်မာပြည်ဖက်ကသုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေ့ါ။ File Upload Software
ဆိုတာလေး တော့စမ်းကြည့်ပါတယ်။ Rapid Share Premium Account ကိုထည့်ပြီးသုံးတာတောင် မလှုပ်ဖူးဖြစ်နေလို့။ ပုံမှာပြထားတာက ကျနော်သုံးတဲ့ File Upload Software ကိုပြထားတာပါ။ အဲ့ဒီမှာ Progress မှာပေါ်တဲ့ အစိမ်းလေး၊ အပြာလေးတွေ မပေါ်ဘူးဗျာ။
အဲ့သလိုကြောင့် အဆင်ပြေမယ့်ဆော့်ဖ်၀ဲလ်လေးများ ညွှန်ပေးကြပါဦး။ ကျေးဇူးပါ။
4shared မကြိုက်ဘူးလားဗျ .. ဖရီး ၅ ဂစ် တောင်ပေးထားတာပဲ ... ကျွန်တော်တော့အဲဒါသုံးတယ်ဗျ ... အဲမှာ 4shared desktop uploader ရှိတယ်လေ .. အဲဒါလေးအဆင်ပြေတယ်ဗျ .. စမ်းကြည့်ပါဦး .... register အရင်လုပ်ဦးနော်.. :D
[HTML]http://www.4shared.com/uploader/[/HTML]ကျန်တာလေးတွေလဲသိတဲ့သူများ ဝင်ပြောပေးပါခင်ဗျာ .. ကျွန်တော်လဲသိချင်လို့ပါ .. အဆင်ပြေပါစေ ..
ကျွန်တော်လည်း 4shared ကို recommend လုပ်တယ်ဗျ။ သူ့ uploader က တင်ရတာ မဆိုးဘူးဗျ။ အဲ.. folder တွေခွဲပြီးလုပ်ရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်မလုပ်တာများတယ်။ သူ့ မူရင်း root အောက်မှာဆိုရင်တော့ upload တင်ရတာ အေးဆေးပဲဗျ။
ကိုုစေတန် ရေ သူက ၇က်ကန့်သတ်ချက်ရှိလား ဆိုတာပြောပြပါဦး
မရှိပါ...5gb ပဲ တင်လို့ရတယ်နဲ့တူယ်။
4shared မှာ အခုဘဲ ဖိုင် Upload လုပ်ထားတာ link ပြန်စစ်ကြည့်တော့ This file is no longer available because it is identical toafile banned because ofaclaim. ဆိုပြီးပေါ်နေတယ် ပြန်တင်ကြည့်တော့လဲဒီတိုင်းပေါ်နေတယ်ကိုစေတန် အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟင် သိရင်ပြောပြပါဦး